UMchunu uhlule u-Muller | News24
UMchunu uhlule u-Muller
Umshayi sibhakela uThabiso “The Rock” Mchunu uhlule uJohnny Muller empini ebiseGoli ngempelasonto. ISITHOMBE: SITHUNYELWE
UMSHAYI sibhakela wakwaXimba eMkhambathini ngaseNkembathawini (Camperdown) uThabiso “The Rock” Mchunu ushaye into ecokeme ngesikhathi ehlula uJohnny Muller empini ebiseGoli, Emperors Palace ngempelasonto.
UMchunu ubonise zisuka nje emizukiswaneni wokuqala ukuthi akazile ukuzobhaka amakhekhe kodwa uzimisele ukubonisa izwe nomhlaba wonke ukuthi yena uzalwa ubani, uzalwaphi futhi wakhiwe ngani. Ubeshaya isibhakela esinenkosi phakathi kuze kuyovalwa. Nesitha sakhe uMuller ubekuthola kulukhuni ukumelana nezibhakela ekade zikhishwa uMacingwana bezimshaya axakeke futhi abonakale edidizela. Kulempi kucace kwathi bha ukuthi uMuller ubengeke amelane nodalimede nemihlokolozo emibi ebelokhu eyithumela njalo.
Lempi enqotshwe ngamapoyinti uMchunu ichaza ukuthi udle umhlanganiso noma-ke useyinqwele noshampeni weSouth African neAfrican Boxing Union Cruiseweight. Imiphumela itshengise ukuthi wonke amajaji womathathu impi ayinike uMchunu ngamaphuzu kwaba (120-108). Ekhuluma emva kwalempi, uMchunu uthe ubezimisele ngendlela eyisimanga ngalempi futhi namaqhinga akhe asebenze ngendlela akade eyihlelile.
“Iqhinga lami bekuwungamtatazeleli uMuller nokuthi izibhakela zami azizwe ngamandla ukuthi ziyezwakala. Ngamafuphi, iqhinga lami bekuwukumhlasela njalo ngikhiphe noma ngimxake ngezibhakela ezinamandla nemihlokolozo ecikayo. Konke ebingikuhlelile kulempi kungisebenzele. Namaqhinga engiwanikwe uBaba wami nomqeqeshi angisize kakhulu,” kusho uMchunu.